Maxaa ka ogtahay faa’idooyinka badan ee laga helo Karootada? – Somali Top News
Maxaa ka ogtahay faa’idooyinka badan ee laga helo Karootada?
December 7, 2018 Somali Top News	0 Comments
Karootadu waxay ka mid tahay cuntooyinka ugu caansan uguna waxtarka badan dhanka caafimaadka ee laga isticmaalo guud ahaan caalamka. karootadu waxay leedahay faa’idooyin badan oo aan ahayn kaliya in aragga ay wax u tarto.
Hadaba Qormadan ka baro 9 faa’iido oo cajiib ah oo karootadu u leedahay caafimaadka jirkeenna:
Wuxuu Kor u qaadaa difaaca jirka:
Galaas karooto ama dabo-case ah oo aad maalin walba cabtaa wuxuu caawinayaa hab-dhiska difaaca jirkaaga, wuxuu ka caawinayaa in jirkaagu si fiican ula dagaalamo cudurrada, dhaawacyada, bakteeriyada, virus-ka. Nafaqooyinka muhiimka ah ee ku jira karootada ee ay ka mid yihiin vitamin K, B6, phosphorus iyo potassium, dhamaantood waxay kaa caawinayaan inay xoojiyaan caafimaadka lafaha iyo awoodda maskaxdaadaba.
Waxay nadiifisaa Beerka:
karootada shiidan waxuu beerkaaga ka saaraa sun kasta oo khatar caafimaad ah, xaddiga vitamin A ee ku badan karootada wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa inuu jirka ka saaro sunta, Cunista karootada oo aad joogteeyso wuxay ka hortagtaa infekshanka ku dhaca beerka ee sababa cudurrada ay ka mid yihiin cagaarshowga, nabarrada beerka iyo cudurro kale oo beerka ku dhaca
Waxay dhalaalisaaa maqaarka:
Iyadoo ay ugu wacan tahay vitamin A-ga iyo maadooyin kale oo ku jira karootada waxay faa’iido weyn u leedahay maqaarka jirka, Waxay ka ilaalisaa maqaarka waxyeellada falaadhaha cadceeda, sidoo kale karootadu waxay jirka ka dhigtaa mid da’ yar oo dhalaalaya, waxayna ka hortagtaa finanka iyo nabarrada maqaarka.
Waxa ay caawisaa xoojinta lafaha:
Karootada waxaa ku jira xadi aad u badan oo Vitamin K ah kaasi oo jidhka ka caawiya inuu samaysto borotiin badan, tani waxay sababtaa in jidhkaagu soo saaro calcium fara badan taasi oo jidhka iyo lafaha jabayba horay u bogsiisa kana caawinaysa inay xoojiso lafahaaga.
Waxay ilaalisaa caafimaadka ilkaha:
Karootada sidoo kale waxaa ku jira maadooyin badan oo ka qeyb qaata, ilaalinta caafimaadka ilkaha iyo cirridka, qaar ka mid ah macdanaha ku jira karootada waxay la dagaalamaan bakteeriyada afka waxayna ka hortagaan suuska ilkaha.
Waxay ka hortagtaa cudurka Stroke-ga:
Cilmi baadhis la sameeyay ayaa lagu ogaaday in cunista karootadu ay 68% hoos u dhigto faaliga.
Waxay kobcisaa caafimaadka wadnaha:
Caafimaadka wadnahaagu wuxuu ku xidhanyahay waxyaabo badan sida inaad seexato hurdo kugu filan inaad dhaqdhaqaaq iyo jimicsi samayso inaad xakamayso stress-kaaga iyo inaad cunto caafimaad qabta aad cunto, karootadana waxaa ku jira maadooyin badan oo wadnahaaga ka caawinaya inuu caafimaad qabo.
Waxay wanaajisaa caafimaadka indhaha Iyo arragga:
Karootada waxaa ku jirto maaddo la dhaho “beta-carotene” oo indhaha faaido ugu jirto oo siyaadiso awoodda aragga. Maadada “beta-carotene” waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca sonkorta isha ay gaarsiiso iyo caadka indhaha fuulo. Karootadu waxay kaloo ka hortagtaa daawane u tahay xanuun ku dhaco indhaha loona yaqaano “Macular Degeneration”, cilladaani waxay timaadaa qofka markuu duqoobo.
Karootadu waxay ka hortagaa cimri degdega:
Haddii aad rajaynayso in muuqaalkuu mudo dhalinyaro sii ahaado oo da’da lagaa dareemin, bilow maanta cunista karootada, waxay si weyn uga hortagtaa calaamadaha muujiya gabowga sida kaduudka ama duuduubka wajiga. Hadaba muuqaalkaagu si uu ahaado mid da’a yar maalin walbo galaas karooto ah.
← Al-Shabaab operations in Somalia to feature Trump diplomat visit
Shabaab claims assassination of Somali Generals →